UAlice Kellen: ngubani lo mbhali kwaye zeziphi iincwadi azibhalileyo | Uncwadi lwangoku
UAlice Kellen. Umbhali waseSpain uzimela phantsi kweli gama langaphandle. Kwaye kungakumangalisa ukuba isiteketiso ngolunye ulwimi sinokumfihla njani umbhali, mhlawumbi, ummelwane wakho, umhlobo wakho okanye loo mntu umbona esitratweni kwaye ungamnaki.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngubani u-Alice Kellen? Yazi ukuba kutheni amabali abo etsala umdla omkhulu kangaka? Okanye uyazi ukuba zingaphi iincwadi azibhalileyo okoko waqala kwilizwe loncwadi? Konke oko kunye nokunye okuninzi yinto esiza kukuxelela yona ngokulandelayo. Ngokuqinisekileyo kuya kubakho izinto ongazaziyo ngaye.
1 Ngubani u-Alice Kellen?
2 Iimpawu zepeni kaAlice Kellen
3 Zeziphi iincwadi ozibhalileyo
Ngubani u-Alice Kellen?
Njengoko besele sikulumkisile, amagama ngamanye amaxesha ayisiyiyo le nto ayibonayo, kwaye, kule meko, oku kuyenzeka ngoAlice Kellen. Kuba ungathini kum ukuba bendinokuxelela ukuba uAlice Kellen nguSpanish? Kuthekani ukuba ndingakuxelela ukuba wazalelwa eValencia? Yiyo ke leyo. Yi Umfazi omncinci waseSpain owazalwa ngo-1989 oqale ukupapasha iinoveli zakhe ngo-2013. Ukuza kuthi ga ngoku akayekanga ukwenza njalo. Ngapha koko, waqala ukuzipapasha, kwaye kungekudala indlu yokupapasha ye-Planeta yamqaphela ukuba aqhubeke nokupapasha iinoveli zakhe.
Ngokomlobi ngokwakhe, umxholo woncwadi uza kuye evela kubazali bakhe, kuba bona, kuba wayemncinci, bamthonya ukuba afunde kwaye kancinci kancinci waqala ukungena kuncwadi kwaye wabhala amabali akhe.
Okwangoku udibanisa owakhe umsebenzi wokubalisa amabali kunye nosapho, izihlobo kunye nezinto azithandayo, njengokuhamba okanye ukubaleka. Ukongeza, uyazithanda izilwanyana, ngakumbi iikati, kunye neemovie kunye nomdlalo kamabonakude.
Uninzi lukhangela igama lokwenyani lika-Alice Kellen, kwaye inyani kukuba kolunye udliwanondlebe bambuza ngokuthe ngqo. Kodwa kuzo zonke impendulo iyafana: "Ndisebenzisa isibizo sokwahlula ubomi bam buqu kubomi bam bobuchwephesha njengombhali, kungoko andifuni kuyityhila loo nyaniso." Ke, kule meko, okungaziwayo kusekho kuba bambalwa kuphela abakwindawo yabo ekufutshane abasaziyo esona sigama sombhali.
Iimpawu zepeni kaAlice Kellen
U-Alice Kellen ngumbhali okwazileyo ukunxibelelana nabaphulaphuli bakhe kwaye ngubani ofumene indawo kwiishelufa ezininzi zamakhaya ngenxa yepeni yakhe, kodwa yintoni le imfanisayo? Ngamazwi ombhali ngokwakhe, okanye abo bafundileyo, kukho oku kulandelayo:
Thetha ngezihloko zemihla ngemihla. Ayikho into efana nenoveli ejongene neengxaki okanye iimeko ezinobunyani, ezo unokujamelana nazo onokuthi ujongane nazo, uzenze zonwabe ngakumbi kwaye akukho mfuneko yokwazi imbali okanye isifundo ukuqonda intsingiselo yenoveli.
Abalinganiswa basebukhosini. Kwaye ngokwenyani sibhekisa kwinto yokuba nabo abafezekanga, baneengxaki zabo, baneziphene kwaye bazama ukuhlala nabo, bamelane nazo kwaye abazichaphazeli. Ngapha koko, le yinto abafundi abaninzi abayincomayo ngemisebenzi yakhe, inyani yokuba akabonakalisi abalinganiswa abaphakanyisiweyo okanye abangenanyani ongenakukwazi ukunxibelelana nabo okanye ongayiqondiyo.
Ipeni elula. Kwaye awunyanzelekanga ukuba udideke kakhulu ukuze ukwazi ukuhambisa into. Ngesi sizathu, u-Alice Kellen ubonakala ngokulula kwimisebenzi yakhe eyenza ukuba amagama akhe, izivakalisi kunye nemihlathi ziqondane, kwaye ade avelane naye kunye nabalinganiswa bakhe ngokwenza umfundi ngokwakhe abe yinxalenye yencwadi, esokola ngokufanayo abalinganiswa abaphethe imbali.
Amaxwebhu amakhulu. Nangona ekuqaleni oku kunqabile, kwaye yinto eyamkelwe ngumbhali ngokwakhe, ukwangqina ukuba uphando kunye namaxwebhu aya esiba mnandi kuye; kwaye uyathanda ukuyiphanda ngaphambi kokubhala. Kwezinye iingxelo, umbhali uvumile ukuba khange aye kuzo zonke iindawo abeka kuzo iincwadi zakhe, nangona abafundi bengafumani siphoso ngenxa yawo wonke umsebenzi obandakanyekileyo ekwazini indawo yokuyiguqulela kwiincwadi zakhe, ethi Kutheni le nto lolunye uphawu olwahlukileyo kuAlice Kellen.
Zeziphi iincwadi ozibhalileyo
Okokugqibela, sifuna ukungafani ngokwahlukileyo Iincwadi ezipapashwe nguAlice Kellen kule mihla.
Konke oko sikunye
Yonke into esingazange sibe yiyo
Izinto eziphambeneyo ezili-13 zokukunika
Inkwenkwe ezobe amaqela eenkwenkwezi
Ekwindla engama-23 phambi kwakho
Mhla layeka ukukhithika eAlaska
Izizathu ezingama-33 zokuphinda ndikubone
Ndise naphi na
Ukusukela oko yaqala ukupapasha, zombini inenqaku lokuhlela kunye nokuzimela, kuye kwacaca ukuba ikwazi ukufumana incwadi enye ngonyaka, nangona kulo nyaka i-2020 ikhuphe ezimbini zazo (yokugqibela, amaphiko kaSophie, ka-Agasti ).
Ngapha koko, incwadi yakhe yokuqala yayi "Ndise naphi na", incwadi azipapashe ngokwakhe kwi-2013 kwaye, ngenxa yokuba phakathi kwabathengisi abaphambili, abapapashi baqala ukumqaphela. Nangona kunjalo, yayiyindlu yokupapasha ye-NEO ekwaziyo ukuyikhupha incwadi, emva konyaka, ngempumelelo enkulu.
Ngaphandle kokuba sele unompapashi omtsha omdala (ngelo xesha wayengaziwa ngokubanzi eSpain, nokuba loluphi uhlobo okanye umpapashi), U-Alice Kellen uqhubeke nokuzipapasha. Inoveli yesibini, Kwakhona Wena, ilandele umendo kadadewabo omdala kwaye ikwazile ukuba yimpumelelo.
Ngesi sizathu, ixesha elithile kamva yayiyindlu yokupapasha yePlaneta ngokwayo eyaqala ukupapasha iinoveli zayo. Kodwa igqithile kwabanye abapapashi abanjengoTitania.
Into eyaziwayo kukuba kucwangcisiwe ukuba U-Alice Kellen wakhupha inoveli entsha ngoFebruwari 2021 kwaye ekupheleni konyaka kuya kubakho ukuphinda kukhutshwe enye yeenoveli zakhe ezindala, "Inkwenkwe eyatsala iinkwenkwezi."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UAlice kellen
Isishwankathelo seLa Celestina
URosa Liksom. Udliwanondlebe nombhali woMfazi weColonel